အိုဗားမားမိန်းမရဲ့အဖြေကိုအရမ်းကြိုက်တယ်# – TodayZ
စွန့်ပစ်ခဲ့ရင် မိန်းမတချို့ ဘဝပျက်မတတ်
ပြန်လာတဲ့ဇနီးကို အိုဘားမားကြီးက မေးတော့ ကျမကိုသူကျောင်းတုန်းက
“တကယ်လို့သာမင်းတို့ ရခဲ့ကြရင် အခုနေမင်းဟာဒီစားသောက်ဆိုင်ကြီး
“သူဟာ အမေရိကန်သမ္မတ ဖြစ်နေပြီလေ…”
ဘဝမှာ ဒီမိန်းမကြောင့်သာ ဒီလိုနေထိုင် ဒီလိုစားသောက်ရပြီး ဒီလိုစည်းစိမ်နဲ့ အဆင်တပြေ နေရမယ့်ကံပါလာတယ်ဆိုတာ သူတို့မသိကြဘဲလသူတို့တော်လို့တတ်လွန်လွန်းလို့ချည်းထင်တတ်ကြတယ်….
ရဲရဲသာလုပ်ပြပါ။ မတွန့်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ ဝမ်းမနည်းပါနဲ့
ကွဲကြည့်လိုက် ခွဲနေကြည့်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ တိတ်တိတ်လေးအချိန်တခုသာပေး စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ…လူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့ ကိုယ်လည်းကျေနပ်ဝမ်းသာရမဲ့ အဖြေတခုရမှာပါ….
သိဉ္စဉ်းမင်းကြီး တောလိုက်ရာမှအပြန် သစ်ပင်ပေါ်တွင် ကောင်းခြင်းငါးဖြာနှင့်ပြည့်စုံသော မိန်းမပျိုတစ်ဦးကို တွေ့သည်နှင့် မေးမြန်းရာ ဖခင်္ခက ပေးစားသည့် ယောက်ျားကိုယူ၍ လိုက်ခဲ့စဉ်တောလမ်းတစ်နေရာ၌ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သဖန်းသီးများခူးစားနေရာ မိမိကဆာလှသဖြင့် တောင်းစားသော် စားလိုလျှင်ကိုယ်တိုင် ခူးစားဟု ဆိုလေသည်။ သို့နှင့် ကိုယ်တိုင်တက်ခူးရာ ပြန်မဆင်းနိုင်အောင် သစ်ပင်အောက်ခြေတွင် ဆူးများဖြင့်ကာရံ၍ ထွက်ပြေးတော့သည်ဟူဧ။်။
မင်းကြီးလည်း ကောင်းခြင်းငါးဖြာနှင့် လှပတင့်တယ်သော် ထိုမိန်းမပျိုကို မိဖုရားခေါင်အဖြစ် တင်မြှောက်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် မင်းကြီးနှင့် မိဖုရားကြီးတို့ တိုင်းခန်းလှည့်လည်ရင်း တစ်နေရာအရောက်တွင် မိဖုရားကြီးက ဣနြေ္ဒမဆည်နိုင်ဘဲ ခစ်ခနဲ ရယ်တော်မူသည်ကို မင်းကြီးမေးလျှင် ဤသို့ဖြေဧ။်။
“ဘုရားနှမကို တောတွင်း၌ ပစ်ပြေးသွားသူသည် ယခုအခါ လမ်းခင်းနေရသည်ကို တွေ့လျှင် ဘုရားနှမကဲ့သို့ ဘုန်းကျက်သရေရှိသူကို ဤလူညံ့မဆောင်နိုင်ရှာ ဟုတွေးမိ၍ရယ်မိကြောင်းပါ ဘုရား”
မင်းကြီးက မယုံကြည်၍ ဘုရားလောင်း
မဟော်သဓသုခမိန်ကို မေးရာ ဘုရားလောင်းက ဤသို့ရှင်းဧ။်။
“ဤမိန်းမမြတ်ကို ယောက်ျားက စွန့်ပစ်သွားသည်ဟူသော စကားကို သားတော်ယုံကြည်ပါသည်။ ဘုန်းမဲ့သောသူသည် ဘုန်းရှိသောသူနှင့် အတူဆက်ဆံ၍မနေနိုင်ကြောင်းပါ ဘုရား” တည်းဟူဧ။်။
ထို့နည်းတူစွာ ဘုန်းကံမြင့်မားသော မိန်းမကောင်းတွေကို ညံ့ဖျင်းသိမ်နုပ်သော ယောက်ျားယုတ်က တန်ဖိုးကိုနားမလည်သောကြောင့် စိတ်၏ဆင်းရဲခြင်း ကိုယ်၏ဆင်းရဲခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေလျက် မိန်းကလေးဘက်က စွန့်ခွာသွားအောင်လည်းကောင်း မိမိကိုယ်တိုင် စွန့်ပစ်၍သော်လည်းကောင်း သူတို့၏ ဘုန်းကံနိမ့်ပါးမှုအတိုင်း ဘဝကို ရွေးခြယ်ကြရ၏။
သို့ဖြစ်ရာ အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့၏တန်ဖိုးကို ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ပြီ တန်ဖိုးထားတတ်သူနှင့်သာလျှင် ကောင်းစွာထိုက်တန်ပါပေ၏။
တကယ်တော့ မိမိကို စွန့်ပစ်သွားသူသည် မိမိ၏ဘုန်းကံအရှိန်ကို မလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့လူသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းဖွယ်စိုးစဉ်းမျှ မရှိသင့်။ သာလွန်မြင့်မြတ်သူနှင့် ဆုံဆည်းရမည့် မိမိကံကိုသာ တွေးတောဝမ်းသာသင့်တော့သည် မဟုတ်ပါလား….
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုစွန့်ခွာသွားလို့ ဝမ်းနည်းပက်လက် မျက်ရည်တစက်စက်နဲ့ ဘဝသေနေသလို
ကျန်ခဲ့တဲ့မိန်းမတွေကို ပြောချင်တာက သတ္တိရှိပါ…
ဘဝကို လက်တွေ့ ကျကျ အကောင်အထည်ဖော်ပါ…
သူများအားမကိုးပါနဲ့ …တစ်နေ့ ကိုယ့်ဘုန်းကိုယ့်ကံနဲ့တန်တဲ့လူနဲ့ကြုံလာခဲ့ရင် ကိုယ့်အခြေအနေတင့်တယ်လှပနေရမယ်လို့ ခံယူထားပါ…
ပီးတော့ သိပ်လှအောင် နေပါ ။
ကုသိုလ်ရပါတယ် များများဝေပေးကြပါ “ကျောက်ကပ်ရောဂါရှင်များအတွက် ထိကရုံးပင်”